Oromoonni Waajiraalee Mootummaa Federaalaa keessa dalagan 283 ari’aman.
OMN;Oduu Onk.19,2015 Dhalattoonni Oromoo 283 waajjiraalee hojii mootummaa Federaalaa hojjataa osoo jiran, dhiheenna kana hujii isaanii irraa ar’amanii turan keessaa, namoonni 20 Maa’ikalaawitti hidhamuun himame.
Namoonni 7 ammoo bilisaan mana hidhaatii bahanis, ammas doorsifamaa akka jiranillee, namonni kun OMN tti himan.
Ji’a Waxabajjii darbe ture waajjiraalee nageenya Federaalaa, qorannoo yakka federaalaa fi Ittisa yakka Federaalaa jedhamu keessa hojjataa osoo jiran, yakka tokko malee dhalatoonni Oromoo 283 gahan hojii isaanii irraa ari’amuun himame.
Namni waajjiraalee hojii federaalaa keessa hojjataa osoo jiran, hojii isaanii irraa kaafaman tokko akka jedhanitti, mastar pilaanii Finfinnee darbe irratti dhalattoonni Oromoo kun mormaa wayta turanitti, ilaalcha biroo qabdu maqaa jedhuun kan hojii isaanii irraa dhaabaman.
Namoota 283 waajjiralee Federaalaa sadii irraa ari’aman keessaa, maqaa adda addaa itti maxxansuun namoonni 30 gahan mana hidhaa Maa’ikalawitti hidhamuu isaaniillee namni kun nutti himanii jiru.
Isaan keessaa namoonni 7 bilisaan mana hidhaati yoomuu bahan, namoonni hafan ammayyuu mana hidhaa Maa’ikalaawii keessatti dararamaa akka jiranis dubbatan.
Dhalattoonni Oromoo biyyuma itti dhalatan keessatti, hojiiwwaan Federaalaa keessaa wayta gara garaatti, dhiibamaa jiru kan jedhan namni kun, keessumattuu, gama siyaasaa fi diinaggeetiin ummanni keenya abbaa fayyadamaa ta’aa hin jiru jedhan.
Namoota hidhamanii turan, manni murtii bilisaan yoomuu mana hidhaatii gadi lakkisu, qondaalonni saba tokkoo ta’an, abbootii murtii tokko tokkos doorsisaa akka jiranillee namni kun nutti himanii jiru.
Mootummaan humnaan biyya bulchaa jiru, ummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun, namoota garii hojii irraa ar’uu, kaan ammoo hidhuu fi ukkamsuu hujii taasifatee akka jiru kan nutti himan namni kun, isa kana jalaa bahuuf, ummanni hundi walii galanii sirna kana jijjiiruudha jedhan.
Akka ammaan kana muldhataa jiru kanatti, jijjiramni haqaa biyyattii san keessatti yoo hin dhufnee, dhalatoonni Oromoo hedduun, hojiilee Federaalaa keessaa ari’amuudhaaf yeroo eeggataa jiru jedhan.
Kanaaf ummattoonni biyyattii hundi mirga isaaniitiif falmachuun, yeroon isaa amma jechuun namni kun dhaamsa qaban dabarfatanii jiru.
Usmaan Ukkumeetu dhiheesse.